Ny Fomba Nanakanan’ny Fitsarana Avo Tao Brezila An’i Lula Tsy Haneho Hevitra Talohan’ireo Fifidianana Breziliana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Novambra 2018 13:13 GMT
Havana vao mangiran-dratsy, tazana avy eny amin'ny sarivongan'ny Fitsarana | Sary: Fellipe Sampaio/Supremo Tribunal Federal/Divulgação
[Amin'ny fiteny Portogaly avokoa ny rohy rehetra, afatsy izay misy filazàna manokana]
Niatrika ady mafy Ny Fitsarana Avo Federaly (STF) teo amin'ny fandraisana fanapahankevitra ara-pitsarana teo anivon'ireo fifidianana izay isan'ny nifandroritana indrindra tao Brezila, hahafahany manapaka raha toa ka afaka ny haneho hevitra amin'ny haino aman-jery Breziliana na tsia ilay filoha teo aloha, Luiz Inácio Lula da Silva,voatazona am-ponja efa hatramin'ny 7 Aprily .
Ny faran'ny volana Septambra, ny gazety Folha de São Paulo, iray amin'ireo sampana filazam-baovao lehibe indrindra ao an-toerana no nanao fangatahana, tamin'ilay mpitsara tompon'andraikitra an'ny fanatanterahana ny didy manameloka an'i Lula, mba ho afaka hanao antsafa amin'ilay filoha teo aloha, izay nampidirina am-ponja noho ny famotsiam-bola sy fanaovana kolikoly an-kolaka. Nolavina anefa izany fangatahana izany ary noentin'ilay gazety teo anoloan'ny STF amin'ny anaran'ny fahalalahan'ny fanaovana gazety ilay raharaha.
Tamin'ny filazàna fa misy karazana lalàna miantoka ny ” zon'ireo olona voatazona am-ponja,na breziliana izy na vahiny, hamela ny sampana fanaovana gazety hanao fanadihadiana, raisina ho tahaka ny zo ahafahana miaro tena”, ka nomen'ilay mpitsara Ricardo Lewandowski avy ao amin'ny STF alàlana ho afaka atao sy ho alefa ny 28 septambra ilay fanadihadiana.
Ny alin'ny 28 Septambra anefa dia naaton‘Ingahy Luiz Fux izany fanapahankevitra izany amin'ny maha filoha lefitry ny STF azy. Izany fangatahana fampiatoana izany dia avy amin'ny Partido Novo (Antoko Vaovao), antoko liberaly izay manindrahindra ny varotra malalaka sy ny fahalalahan'ny tsirairay.
Nilaza ilay mpitsara Fux fa voarara ho an'ilay filoha teo aloha ny “fanaovana antsafa na fanambaràna amin'ny fampahalalam-baovao, na amin'ireo sampana filazambaovao hafa natao hizara vaovao ho an'ny daholobe”. Ankoatra izay, raha toa ka “efa misy antsafa na fanambaràna efa notontosain'ilay andaniny, dia tsy azo atao mihitsy ny mandefa izany rakitra izany, fa raha tsy izany dia horaisina ho fanaovana heloka tsy fankatoavana”.
Araky ny nambaran'i Fux, “ahiana mafy ny mety haha-loharanonà torohay diso ny fandefasana mialohan'ny fifidianana ilay antsafa nataon'i Lula da Silva , izay fangatahana nolavina”. Nilaza ilay ministra noho izany fa “fampirindràna manokana ny fahafahan'ny asa fanaovana gazety izany”
Ho valin'izay, nanamafy ny fanapahankeviny indray ary nanome baiko ny hanatanterahina izany ilay mpitsara Ricardo Lewandowski. Notsipihany manokana koa fa tsy manana fahefana ny hitsipaka ny fanapahankeviny i Fux, nanamafy ilay mpitsara fa ny fitondrana ilay fanapahankevitra amin'ny fivoriana manaraka dia manafoana avy hatrany ny hevitry ny STF.
Telo andro taorian'izay, anjaran'ilay filohan'ny STF indray no naneho ny heviny. Naneho ny fanoherany ny fandefasan'ny Ministeran'ny filaminam-bahoaka fangatahana fanazavàna ilay mpitsara Dias Toffoli. Nanambara izy fa tokony ho hotanterahana ny fampitsaharanny a fanapahankevitra navoakan'ny mpitsara Luiz Fux mandra-pandaminan'ny fivoriamben'ny mpitsara azy.
Noho izany, tazonina ny fandraràna ilay filoha teo aloha Lula tsy hahazo haneho hevitra ampahibemaso, ary koa ny fanaovana fanadihadiana manokana aminy. Ankoatran'ny antsafa nokasain'i Folha de São Paulo, izay saika hiarahana tamin'ilay mpanao gazety Florestan Fernandes Jr. dia voarara avokoa ireo nokasaina hatao niaraka taminà filazambaovao hafa aza.
Tao amin'ilay antsafa nataon'i la Folha, mpampakateny manokana ho amin'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety avy ao amin'ny Kaomisiona iraisan'ny samy Amerikana momba ny Zon'olombelona avy amin'ny Fikambanan'ireo Fanjakana Amerikàna (OEA) , nanambara i Edison Lanza hoe :
Araky ny hevitro manokana, efa sivana mialoha sahady ary fanitsakitsahana ny zon'ilay olona nokasaina hanaovana fanadihadiana tsy ho afaka haneho hevitra ilay fanapahankevitra handràra ny filazam-baovao tsy hanao antsafa, ary fanitsakitsahana ny sehatra filazambaovao te-hanao ny asany izay ny fanomezam-baovao ny vahoaka.
Ny minisitra Dias Toffoli mitarika ny fivorian'ny STF. Sary: Nelson Jr./Tribunal Suprême Fédéral
Ny ady momba ny fanapahankevitra teo anivon'ny STF no vao mainka nanamafy ny hetsika nataon'ireo rafitra maro mpisolo tena ny sehatry ny filazambaovao. Taorian'ilay fanapahankevitra voalohany noraisin'ilay mpitsara Luiz Fux, izay niresaka momba ny “fampirindràna manokana ny fahafahan'ny asa fanaovana gazety “, namoaka fanambaràna ny fikambanan'ireo breziliana mpanao gazety mpanao fikarohana lalina (ABRAJI) izay nanamafy fa “sarotra ny hampirindra ny fahafahana maneho hevitra amin'ny fameperana sy fanivànana”, ka nangatahany ny tribonaly mba hamerina indray ny fifanarahana nosoniavin'ny Fitsaràna nandritra ilay fanafoanana ny lalàna momba ny filazam-baovao izay milaza fa :
não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas (…) a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público
Tsy andrakitry ny Fanjakana, na ny rafitra hafa, ny mamaritra mialoha ny zavatra azon'ny olona na ny mpanao gazety lazaina na tsia (…) ny sivana ataon'ny fanjakana, izay alefan'ny iray amin'ireo fahefana telo ireo dia fanehoana am-pahasahiana ny endrika tsy refesimandidy ananan'ny fanjakana.
Ny Federasiona Nasionalin'ny mpanao gazety (FENAJ) koa dia namoaka tatitra taorian'ny fanamafisana ny fanapahankevitry ny mpitsara Toffoli. Toherin'io Federasiona io ny sivana ary nilaza izy ireo fa “Voatohintohina ny demokrasia breziliana satria ireo andrim-panjakana natao hiahy azy indray no manolana ny fanjakana demokratika”, tamin'ny fanasokajiana ny fihetsiky ny STF ho “Tsy azo ekena”.
Tamin'ny lantompeo tsy dia nitratrevatreva loatra, notohanan'ny ABI (fikambanan'ny gazety breziliàna) ihany koa, na dia voararan'ny lalàna momba ny fanagadràna aza, mateti-pitranga ny antsafa ifanaovana amin'ireo olona voatazona am-ponja eo amin'ny filazam-baovao breziliana, tamin'ny fiaikena kosa anefa fa tena “tsy manam-paharoa” ny an'ilay filoha teo aloha voafonja. Nanazava koa ilay Fikambanana tamin'ny filazàny hoe tsy ho avy amin'ny “fahamafisana hatoka na ny fivaivain'ny fampielezankevitra politika ankehitriny” ny vahaolana amin'io disadisa io .
Ny toeran'ny filazambaovao ao Brezila
Ilay Filohan'ny Tribonaly Federaly Faratampony , Ny Ministra Dias Toffoli, mamory mpanao gazety| Sary: Rosinei Coutinho/Tribonaly Federaly Faratampony
Tao anatin'ilay fanadihadiana farany momba ny fampilaharana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety nataon'ny fikambanana tsy miankina, Reporters Sans frontières (RSF), Brezila no eo amin'ny laharana faha 102 amin'ny firenena 180. Toerana izay lazaina ho “tena tsy azo antoka”. Mbola araky ny RSF ihany, Brezila no isan'ny firenena tena mpanao herisetra be indrindra amin'ny mpanao gazety ao Amerika Latina. Midona amin'ny herisetra sy ny fitazonana an'ireo vohikala mpanome vaovao an'ireo fikambanana vitsivitsy mifandray aminà antoko na politisiana ny fahafahan'ny asa fanaovana gazety.
Ny rafitra araky ny lalàna sy ireo andrim-panjakana mikendry ny hiaro ny mpanao gazety sy ny loharanony koa moa tsy ampy. Ankoatran'ny fanaovana ramatahora ny ainy sy ny vatany, atahoran'ireo breziliàna mpanao gazety ihany koa ny fanasaziana avy amin'ny fanjakana, izay indraindray tena atidohan'ny fanaovana raharaham-pitsaràna mihoam-pampana.
Na teo aza ireo fandrosoana vitsivitsy somary menamenatra naterak'ireo fanapahankevitra natao hiarovana ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety, lasa lampihazon'ny fifandirana ny STF, fifandirana izay nandresen'ny tombontsoa politika teo anatrehan'ny fahalalahan'ny asa fanaovana gazety.
Raha toa ka mbola fampiatoana ilay antsafa atao amin'i Lula aloha hatreto no fanapahankevitra farany mandra-pisian'ny fivorian'ny STF indray, zavatra iray mibaribary tamin'ny fifidianana ny h filohampirenena ny famelezana ny fahafahan'ny fanaovana gazety. Araky ny voalazan'ny ABRAJI, ny taona 2018, trangàna herisetra miisa 137 natao tamina mpanao gazety maro no efa voarakitra tao anatin'ny sehatry ny politika, antoko sy fifidianana. Miha mitombo hatrany io isa io raha toa ka mitombo ihany koa ny fiffandroritan'ireo antoko ary ireny famelezana ny filazambaovao ireny no ambetin-tenin'ireo Kandidà amin'ny fifidianana ho filoha, na ireo antoko na ireo mafàna fo politika.